ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၇၃ သန်းကျော် ပမာဏအထိ ခွင့်ပြုေ?? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၇၃ သန်းကျော်ပမာဏအထိ ခွင့် ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၂ဝ၆ ခုအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃ဝ၇ ဒသမ ၂ဝ၇ သန်းခွင့်ပြုပေးထားပြီး အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃ သန်းခွင့်ပြုပေးခဲ့သဖြင့် စုစုပေါင်းခွင့်ပြုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူးဦးသန်းအောင်ကျော်က”၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာမှာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၂ဝ၆ ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅ဝ၈ ဒသမ ၄၅၃ သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင်ဆို စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃ဝ၇ ဒသမ ၂ဝ၇ သန်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုးမြှင့်ဆိုတာက ခွင့်ပြုပြီးသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ထပ်တိုးမြှင့်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပါအဝင်ဆို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုစုပေါင်းပမာဏက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု မတ် ၅ ရက်က ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုခွင့်ပြုခဲ့ကာ လုပ်ငန်းလေးခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီကလုပ်ငန်းလေးခု၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီက လုပ်ငန်းတစ်ခု စုစုပေါင်းလုပ်ငန်း ၁၁ ခုကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အီတလီ ရွေးကောက်ပွဲ ဘာလူစကိုနီ၏ လက်ယာယိမ်း မဟာမိတ်တို့ ဦးဆောင်နေ
အမေရိကန် ကျွမ်းကျင်သူများအား နျူကလီးယား စမ်းသပ်ရာ နယ်မြေသို့ လာရောက်ရန် မြောက်ကိုရီးယားေ??
ထိုင်းသာသနာရေး ဦးစီးဌာန အကြီးအကဲနှင့် ရှစ်ဦး ဘုရားငွေ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်၍ တရားစွဲဆိုခံရ
ခိုင်လုံသော အထောက်အထား မရှိသည့်အတွက် ဟိုတယ်ခရီး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကို အရေးယူမှု မပြုလုပ်ခဲ့